လှခငျြလကျြနှငျ့ ဝကျခွံဖကျြနသေူမြား အတှကျ ဝကျခွံအကွောငျး သိကောငျးစရာ - OnDoctor
လှခငျြလကျြနှငျ့ ဝကျခွံဖကျြနသေူမြား အတှကျ ဝကျခွံအကွောငျး သိကောငျးစရာ
By OnDoctor Editor	 On Jul 4, 2018 Last updated Jul 23, 2018
လှချင်လျက်နှင့် ဝက်ခြံဖျက်နေသူများ အတွက် ဝက်ခြံအကြောင်း သိကောင်းစရာ
လှချင်သော ပျိုမေများ နှင့် သန့်ချင်၊ခန့်ချင်သော ညီမောင်များ အတွက် ဝက်ခြံ ပေါက်ခြင်းဟာ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခု ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတခါ မှာ Dr.Z ကဝက်ခြံ အကြောင်း ကို စုံစုံလင်လင် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
-ဝက်ခြံဆိုတာ ကြာရှည် အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း ကြောင့် မျက်နှာ၊ ပခုံး၊ ကျောကုန်း ၊ ရင်ဘတ် နှင့် လက်တို့ တွင် အဖု အစက် များ ဖြစ်ခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။
-အများအားဖြင့်ဝက်ခြံဟာ လူတွင် အဆီကျိတ်ဂလင်း များ စတင်ပေါ်ပေါက်လာရာ အချိန်ဖြစ်တဲ့ လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော် ဝင်စတွင် အဖြစ်များသော်လည်း ဘယ်အရွယ်မဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံသည် အန္တရာယ် မရှိသော်လည်း အမာရွတ် ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
-အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၃၀ အထိ လူ ၄ ယောက်တွင် ၃ ယောက်မှာ ဝက်ခြံပေါက်သည် အထိအဖြစ်များပါတယ်။
-လူ့အရေပြား၏ မှာ အရေပြားအောက်တွင် ရှိသော အဆီကျိတ်ဂလင်း လေးများ သို့ ဆက်ပေးတဲ့ အပေါက်သေးသေး လေးများရှိပါတယ်။
-ထိုအပေါက် သေးသေးလေးများ မှ တဆင့် အရေပြားဆဲလ်အသေ များကိုသယ်ဆောင်လာသော Sebum လို့ခေါ်တဲ့ အဆီများထွက်လေ့ရှိပါတယ်။
-ထိုအပေါက်ကလေးများ ပိတ်ဆို့သွားတဲ့ အခါ ဆဲလ်အသေ၊ အဆီ နဲ့ အမွှေးများ စုပေါင်းပြီး အခဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ထို အခဲအားပိုးဝင်သွားတဲ့ အခါမှာ တော့ ရောင်ပြီး ဝက်ခြံ အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
-Propionibacterium acnes (P. acnes) ဆိုတာကတော့ အရေပြားမှာ နေပြီး ဝက်ခြံ ဖြစ်စေတဲ့ ဗက်တီးရီးယားပိုး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
-ဟော်မုန်းကလည်း အဓိကနေရာက ပါဝင်နေပါတယ်။
-လူပျိုဖော်၊အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင်androgen(အန်ဒရိုဂျင်) ပမာဏများပြားလေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီး များတွင် အဆိုပါ androgen မှ oestrogen (အီစရိုဂျင်)အဖြစ်သို့ပြောင်းပါတယ်။
-အဆိုပါ androgen မှာ အဆီဂလင်းအား ကြီးထွားစေပြီး sebum အဆီပိုမို ထုတ်ပါတယ်။ အဆီများပြားလာလျှင် အပေါက်လေးများ ၏ ဆဲလ်နံရံကို ပျက်စီးစေပြီး ဗက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှုကို အားပေးစေပါတယ်။
ထို့အပြင် အခြားအရာ များက လည်း ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ အဆိုပါအရာတွေကတော့
•androgen နဲ့ lithium ပါသောဆေးများ
-ဝက်ခြံအား အရွယ်၊ အရောင် နဲ့ နာကျင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး
၁.Whiteheads: အရေပြားအောက်တွင် အဖုအသေးလေးအနေဖြင့်ရှိသော ဝက်ခြံ
၃.Papules: ပန်းရောင်ဖြစ်ပြီး အရေပြားပေါ်တွင်ရှိသော ဝက်ခြံ
၄.Pustules: အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ထိပ်တွင်ပြည်ရှိသော ဝက်ခြံ
၅.Nobules: ကြီးမား၊ နာကျင်စေပြီး အရေပြားပေါ်တွင်ရှိသော ဝက်ခြံခဲ ကြီး
၆.Cysts: အရေပြားပေါ်တွင်ရှိပြီး နာကျင်စေကာ ပြည်များ နှင့် ပြည့်နေသော ဝက်ခြံ ဖြစ်ပြီး အမာရွတ်ဖြစ်စေတတ်သော ဝက်ခြံ
စသည်ဖြင့် ၆ မျိုးခွဲထားပါတယ်။
-ဝက်ခြံ ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကုလေ့ရှိပါတယ်။
ဝက်ခြံ အပျော့စားများ အတွက်မူ ဆေးဆိုင်တွင်ရနိုင်သော ဝက်ခြံပျောက် ဆေးများနှင် ကု၍ရပါတယ်။ ဝက်ခြံပျောက်ဆေးတွေကတော့
-Resorcinol : Whitehead နှင့် Blackhead အမျိုးအစားများကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။
-Benzoyl Peroxide: ဗက်တီးရီးယားများ ကို သေစေပြီး sebum အဆီ ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
-Salicylic Acid : Blackheads နှင့် Whiteheads များကိုသက်သာစေပြီး ရောင်ရမ်း မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
-Retin-A : အရေပြားရှိ ပေါက်လေးများ ပိတ်ခြင်းကို ဆဲလ်အသစ်လဲ ခြင်းဖြင့် ပြန်ပွင့်စေပါတယ်။
-Azelaic Acid : ဆဲလ်များကို ခိုင်မာစေပြီး ဗက်တီးရီးယားများကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
စတင်လိမ်းမည်ဆိုလျှင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းငယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် အပျော့စားသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဝက်ခြံအပြင်းစားများ အား အရေပြားအထူကုနှင့် သွားရောက်တိုင်ပင်ပြီးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ ဝက်ခြံအပြင်းစားများ အတွက်ကုထုံးများ
-Corticosteroid Injection (စတီးရွိက်ထိုးဆေး) :ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေကာ အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြန် အနာကျက်ခြင်းကို မြန်စေပါတယ်။
-ပိုးသတ်ဆေး: ဗက်တီးရီးယား များကိုသေစေကာ Erythromycin နှင့် Tetracycline အသုံးများလေ့ရှိပါတယ်။
-သန္ဓေတားဆေး : အမျိုးသမီးများတွင် အဆီဂလင်းများလျော့ကျစေရန် သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
-Antimicrobial လိမ်းဆေးများ : Clindamycin နှင့် sodium sulfacetamide တို့ သုံးလေ့ရှိပြီး P.acnes အရေအတွက် ကိုလျော့ကျရန်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
-Isotretinoin : retinoid အပြင်းစား ဖြစ်ပြီး Cysts ဝက်ခြံ အမျိုးအစား နှင့် အခြားသော ဆေးများဖြင့် မပျောက်ကင်းသော ဝက်ခြံ အမျိုးအစားတွင်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသောကြောင့် ဆရာဝန်၏ တိကျသော ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
-အစားအသောက် : ဗီတာမင် အေ၊ အီး နှင့် ဇင့် ဓါတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ က ဝက်ခြံထွက်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
-Moisturizer လိမ်းခြင်း : ရှားစောင်း ပါသော moisturizer များမှာ ဝက်ခြံကို ကာကွယ်စေပြီး ဝက်ခြံ အရောင်ကျစေကြောင်း စမ်းသပ်မှု တစ်ခုကဆိုထားပါတယ်။
ဝက်ခြံ မပေါက်အောင်ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ?
-ရေနွေးနှင့်မျက်နှာ မှန်မှန်သစ်ပါ။ သို့သော် ၂ကြိမ်ထက်ပိုမသစ်ပါနှင့်။
-ဝက်ခြံအား မထိ၊မကုတ်၊ မဖဲ့မိစေရန်သတိပြုပါ။ ရောဂါပိုးဝင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
-ဖုန်းပြောလျှင် မျက်နှာ အနီးသို့ကပ်ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
-မျက်မှန်တက်ရပါက မျက်မှန်ကို မကြာခဏ ဆေးသင့်ပါတယ်။
-ကျောကုန်း၊ ရင်ဘတ် နှင့် လက်တို့တွင် ဝက်ခြံပေါက်ပါက ပွပွချောင်ချောင် အဝတ်များသာဝတ်သင့်ပါတယ်။
-စိတ်ဖိစီးပါက ဝက်ခြံ ထွက်မှုကိုအားပေးသော cortisone နှင့် adrenaline ဓါတ်ကို တက်စေသည့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချရပါမယ်။
ပျိုမေ ညီမောင်တို့ ဝက်ခြံကင်းပြီး လှပသော မျက်နှာလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ Dr.Z ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်….
သနပျခါး : မွနျမာတို့ရဲ့ အလှ
သဘာဝ က ပေးတဲ့ဆေးတဈခှကျ (သို့မဟုတျ) ကိုယျလကျလှုပျရှားအားကစား
လှခငျြသော ပြိုမမြေား နှငျ့ သနျ့ခငျြ၊ခနျ့ခငျြသော ညီမောငျမြား အတှကျ ဝကျခွံ ပေါကျခွငျးဟာ အိပျမကျဆိုးတဈခု ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတခါ မှာ Dr.Z ကဝကျခွံ အကွောငျး ကို စုံစုံလငျလငျ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
-ဝကျခွံဆိုတာ ကွာရှညျ အရပွေားရောငျရမျးခွငျး ကွောငျ့ မကျြနှာ၊ ပခုံး၊ ကြောကုနျး ၊ ရငျဘတျ နှငျ့ လကျတို့ တှငျ အဖု အစကျ မြား ဖွဈခွငျးကို ချေါပါတယျ။
-အမြားအားဖွငျ့ဝကျခွံဟာ လူတှငျ အဆီကြိတျဂလငျး မြား စတငျပျေါပေါကျလာရာ အခြိနျဖွဈတဲ့ လူပြိုဖျော၊ အပြိုဖျော ဝငျစတှငျ အဖွဈမြားသျောလညျး ဘယျအရှယျမဆိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဝကျခွံသညျ အန်တရာယျ မရှိသျောလညျး အမာရှတျ ကနျြခဲ့နိုငျပါတယျ။
-အသကျ ၁၁ နှဈမှ ၃၀ အထိ လူ ၄ ယောကျတှငျ ၃ ယောကျမှာ ဝကျခွံပေါကျသညျ အထိအဖွဈမြားပါတယျ။
-လူ့အရပွေား၏ မှာ အရပွေားအောကျတှငျ ရှိသော အဆီကြိတျဂလငျး လေးမြား သို့ ဆကျပေးတဲ့ အပေါကျသေးသေး လေးမြားရှိပါတယျ။
-ထိုအပေါကျ သေးသေးလေးမြား မှ တဆငျ့ အရပွေားဆဲလျအသေ မြားကိုသယျဆောငျလာသော Sebum လို့ချေါတဲ့ အဆီမြားထှကျလရှေိ့ပါတယျ။
-ထိုအပေါကျကလေးမြား ပိတျဆို့သှားတဲ့ အခါ ဆဲလျအသေ၊ အဆီ နဲ့ အမှေးမြား စုပေါငျးပွီး အခဲဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ထို အခဲအားပိုးဝငျသှားတဲ့ အခါမှာ တော့ ရောငျပွီး ဝကျခွံ အဖွဈပွောငျးလဲသှားပါတယျ။
-Propionibacterium acnes (P. acnes) ဆိုတာကတော့ အရပွေားမှာ နပွေီး ဝကျခွံ ဖွဈစတေဲ့ ဗကျတီးရီးယားပိုး ပဲဖွဈပါတယျ။
-ဟျောမုနျးကလညျး အဓိကနရောက ပါဝငျနပေါတယျ။
-လူပြိုဖျော၊အပြိုဖျောဝငျခြိနျတှငျandrogen(အနျဒရိုဂငျြ) ပမာဏမြားပွားလရှေိ့ပါတယျ။ အမြိုးသမီး မြားတှငျ အဆိုပါ androgen မှ oestrogen (အီစရိုဂငျြ)အဖွဈသို့ပွောငျးပါတယျ။
-အဆိုပါ androgen မှာ အဆီဂလငျးအား ကွီးထှားစပွေီး sebum အဆီပိုမို ထုတျပါတယျ။ အဆီမြားပွားလာလြှငျ အပေါကျလေးမြား ၏ ဆဲလျနံရံကို ပကျြစီးစပွေီး ဗကျတီးရီးယား ပေါကျဖှားမှုကို အားပေးစပေါတယျ။
ထို့အပွငျ အခွားအရာ မြားက လညျး ဝကျခွံပေါကျခွငျးကို အားပေးပါတယျ။ အဆိုပါအရာတှကေတော့
•androgen နဲ့ lithium ပါသောဆေးမြား
-ဝကျခွံအား အရှယျ၊ အရောငျ နဲ့ နာကငျြမှုအပျေါမူတညျပွီး
၁.Whiteheads: အရပွေားအောကျတှငျ အဖုအသေးလေးအနဖွေငျ့ရှိသော ဝကျခွံ
၃.Papules: ပနျးရောငျဖွဈပွီး အရပွေားပျေါတှငျရှိသော ဝကျခွံ
၄.Pustules: အနီရောငျဖွဈပွီး ထိပျတှငျပွညျရှိသော ဝကျခွံ
၅.Nobules: ကွီးမား၊ နာကငျြစပွေီး အရပွေားပျေါတှငျရှိသော ဝကျခွံခဲ ကွီး
၆.Cysts: အရပွေားပျေါတှငျရှိပွီး နာကငျြစကော ပွညျမြား နှငျ့ ပွညျ့နသေော ဝကျခွံ ဖွဈပွီး အမာရှတျဖွဈစတေတျသော ဝကျခွံ
စသညျဖွငျ့ ၆ မြိုးခှဲထားပါတယျ။
-ဝကျခွံ ၏ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီးကုလရှေိ့ပါတယျ။
ဝကျခွံ အပြော့စားမြား အတှကျမူ ဆေးဆိုငျတှငျရနိုငျသော ဝကျခွံပြောကျ ဆေးမြားနှငျ ကု၍ရပါတယျ။ ဝကျခွံပြောကျဆေးတှကေတော့
-Resorcinol : Whitehead နှငျ့ Blackhead အမြိုးအစားမြားကို ပြောကျကငျးသကျသာစပေါတယျ။
-Benzoyl Peroxide: ဗကျတီးရီးယားမြား ကို သစေပွေီး sebum အဆီ ထုတျလုပျမှုကို လြှော့ခပြေးပါတယျ။
-Salicylic Acid : Blackheads နှငျ့ Whiteheads မြားကိုသကျသာစပွေီး ရောငျရမျး မှုကို သကျသာစပေါတယျ။
-Retin-A : အရပွေားရှိ ပေါကျလေးမြား ပိတျခွငျးကို ဆဲလျအသဈလဲ ခွငျးဖွငျ့ ပွနျပှငျ့စပေါတယျ။
-Azelaic Acid : ဆဲလျမြားကို ခိုငျမာစပွေီး ဗကျတီးရီးယားမြားကို လြှော့ခပြေးပါတယျ။
စတငျလိမျးမညျဆိုလြှငျ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး အနညျးငယျရှိနိုငျသောကွောငျ့ အပြော့စားသာ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။
ဝကျခွံအပွငျးစားမြား အား အရပွေားအထူကုနှငျ့ သှားရောကျတိုငျပငျပွီးကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ။ ဝကျခွံအပွငျးစားမြား အတှကျကုထုံးမြား
-Corticosteroid Injection (စတီးရှိကျထိုးဆေး) :ရောငျရမျးခွငျးကို သကျသာစကော အမာရှတျဖွဈခွငျးကို ကာကှယျပေးသညျ့အပွနျ အနာကကျြခွငျးကို မွနျစပေါတယျ။
-ပိုးသတျဆေး: ဗကျတီးရီးယား မြားကိုသစေကော Erythromycin နှငျ့ Tetracycline အသုံးမြားလရှေိ့ပါတယျ။
-သန်ဓတေားဆေး : အမြိုးသမီးမြားတှငျ အဆီဂလငျးမြားလြော့ကစြရေနျ သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
-Antimicrobial လိမျးဆေးမြား : Clindamycin နှငျ့ sodium sulfacetamide တို့ သုံးလရှေိ့ပွီး P.acnes အရအေတှကျ ကိုလြော့ကရြနျသုံးလရှေိ့ပါတယျ။
-Isotretinoin : retinoid အပွငျးစား ဖွဈပွီး Cysts ဝကျခွံ အမြိုးအစား နှငျ့ အခွားသော ဆေးမြားဖွငျ့ မပြောကျကငျးသော ဝကျခွံ အမြိုးအစားတှငျသုံးလရှေိ့ပါတယျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမြားသောကွောငျ့ ဆရာဝနျ၏ တိကသြော ညှနျကွားခကျြဖွငျ့သာ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။
-အစားအသောကျ : ဗီတာမငျ အေ၊ အီး နှငျ့ ဇငျ့ ဓါတျကွှယျဝသော အစားအစာမြား က ဝကျခွံထှကျမှုကို လြော့ကစြပေါတယျ။
-Moisturizer လိမျးခွငျး : ရှားစောငျး ပါသော moisturizer မြားမှာ ဝကျခွံကို ကာကှယျစပွေီး ဝကျခွံ အရောငျကစြကွေောငျး စမျးသပျမှု တဈခုကဆိုထားပါတယျ။
ဝကျခွံ မပေါကျအောငျဘယျလို ကာကှယျမလဲ?
-ရနှေေးနှငျ့မကျြနှာ မှနျမှနျသဈပါ။ သို့သျော ၂ကွိမျထကျပိုမသဈပါနှငျ့။
-ဝကျခွံအား မထိ၊မကုတျ၊ မဖဲ့မိစရေနျသတိပွုပါ။ ရောဂါပိုးဝငျနိုငျသောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
-ဖုနျးပွောလြှငျ မကျြနှာ အနီးသို့ကပျပွောခွငျးမှ ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။
-မကျြမှနျတကျရပါက မကျြမှနျကို မကွာခဏ ဆေးသငျ့ပါတယျ။
-ကြောကုနျး၊ ရငျဘတျ နှငျ့ လကျတို့တှငျ ဝကျခွံပေါကျပါက ပှပှခြောငျခြောငျ အဝတျမြားသာဝတျသငျ့ပါတယျ။
-စိတျဖိစီးပါက ဝကျခွံ ထှကျမှုကိုအားပေးသော cortisone နှငျ့ adrenaline ဓါတျကို တကျစသေညျ့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ခရြပါမယျ။
ပြိုမေ ညီမောငျတို့ ဝကျခွံကငျးပွီး လှပသော မကျြနှာလေးတှေ ပိုငျဆိုငျပါစလေို့ Dr.Z ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ….
အမြိုးသမီးမြားနဲ့ ကွုံတှရေ့သော စိတျကရြောဂါလက်ခဏာ မြား…
ငုံးဥလို အသားအရညျမြိုး မဖွဈဖို့
ပါးစပျကသောကျရတဲ့ ကိုယျဝနျတားဆေးတှရေဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမြား
အဆုတျကငျဆာရဲ့ မသိမသာ လက်ခဏာ (၉)ခု
ကလေးမှေးပွီးရငျ အခငျြးသှေးနဲ့တဈရှုး သိမျးတဲ့အလအေ့ထ…